Home Wararka Khilaaf Xoogan Oo Soo kala dhex Galay Ciidamada Kenya iyo Maamulka...
Khilaaf Xoogan Oo Soo kala dhex Galay Ciidamada Kenya iyo Maamulka degmada Ceelwaaq
Khilaafkaan ayaa yimid ka dib markii habeen ka hor Ciidamada Kenya ay dileyn laba ka mid ah Shaqaalaha shirkada Isgaarsiinta hormuud ee degmadaasi Ceelwaaq ee Gobolka Gedo.
Guddoomiye ku xigeenka degmada Ceelwaaq Sahal Macalin Aadan ayaa waxa uu sheegay in khilaafkaas uu ka dhashay xasuuq maalin walba ay Ciidamda Kenya ku hayaan Shacabka degmada iyo deegaanada kale ee gobolka Gedo.
Waxa uu sheegay in si arxandaro ah ay u dileyn ciidamada Kenya laba ka mid ah Shaqaalaha Shirkad Hormuud,isla markaana tacadiyada ay Shacabka u geysanayaan ay yihiin kuwo sii kordhaya.
Tan iyo Sanadkii 2012 ayuu sheegay markii Ciidamada soo galeen gobolka Gedo in ay dileyn in ka badan 50 qof oo Shacab ah,waxa uuna ugu baaqay Madaxda Sare ee dowladda,Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya in ay Ciidamada Kenya kala hadlaan dhibaatooyinka ay ku hayaan Shacabka Gobolka Gedo.
Previous articleDFS Oo Lagu Eedeyay inay Musuq-Maasuqdo deeqaaha ay Beesha Caalamka ugu deyqaan
Next articleSalaad Cali Jeelle Oo Sheegay in Dowlada Soomaaliya ay ka buuxan Al-shabaab
Xisbiyada Madaxweynayaashii hore oo Isbaheysi Cusub ku dhawaaqaya
Dagaalkii Kaxandhaale oo joogsaday iyo hub aruursi lasoo warinaayo